Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Guam » CDC dia manome ny laharam-pitaterana ratsy indrindra any Guam
Governora Guam amin'ny laharam-pitaterana ratsy indrindra amin'ny CDC
Raha avy amin'ny laharam-pahamehana amin'ny dia amin'ny antonony mankany amin'ny avo noho ny COVID-19 tao anatin'ny iray volana monja, ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia nanova ny laharam-pitaterana ho an'i Guam ho avo indrindra - ny haavon'ny laharana ratsy indrindra.
Vao avy nametra famerana ny fivezivezena atsinanana i Guam roa andro lasa izay mba hamohana ny fizahan-tany indray.
Ny governoran'i Guam dia nanambara ny fivoriana ara-tsosialy hatramin'ny olona 100 avela.
Ny clusters COVID-19 farany teo dia fantatra, nampiakatra ny isan'ny tranga ary nahatonga ny CDC hanome an'i Guam ny laharam-pitaterana ratsy indrindra azo atao.
Vao 2 andro lasa izay tamin'ny 15 May, nanamora ny fameperana aorian'ny fitsangatsanganana i Guam hanokatra indray ny fizahan-tany. Ny naoty iray "avo indrindra" na avo lenta avy amin'ny CDC dia midika hoe "tokony hisoroka ny fitsangatsanganana rehetra mankany Guam ny mpandeha."
Guam dia nisy tranga 100 vaovao COVID-19 tao anatin'ny 28 andro lasa ary vao haingana dia nandrakitra fahafatesan'olona 3 mifandraika amin'ny COVID-19 tao anatin'ny 3 andro. Ireo 3 maty dia mbola tsy vita vaksiny.
Ny governoran'i Guam Lou Leon Guerrero ny talata teo no nilaza izany fanovana ny tahan'ny loza mety hitranga any Guam “Tsy tokony hojerena ho fihemorana” amin'ny fanarenana ny nosy sy ho an'ny fizahantany fa fampahatsiahivana kosa fa tsy maintsy hitazomana ny fepetra fanalefahana COVID-19 fototra.
Navoakan'ny Governora ny quarantine an'ny governemanta taorian'ny fitsangatsanganana ho an'ireo mpandeha nanao vaksiny feno sy ireo izay avy amin'ny aotra hatramin'ny vitsy ny tranga COVID-19, ary koa namela ny fivoriana ara-tsosialy ho an'ny olona 100 noho ny fisondrotana farany nataon'ny ezak'i Guam.
Fa ny CDC kosa dia nanambany ny laharan'ny Guam indray, tapa-bolana monja taorian'ny nanovany azy io ho “antonony” ho “avo”. Ny fanovana teo aloha dia vokatry ny tsikombakombakomba hita farany. “Fantatsika tsara fa ny tranga tsara tokana dia mety hitombo ho lasa cluster sy ny voka-dratsy eo amin'ny fianakaviana, ny sekoly ary ny orinasa. Azafady mba ataovy mifampiaro sy miaro an'i Guam, "hoy izy.